XOG DEG DEG AH: Madaxweynaha & RW Soomaaliya oo kulan deg deg ah ka yeeshay go’aamada ka soo baxay Kismaayo, qaatay mawqif adag | Www.tusmo.net
XOG DEG DEG AH: Madaxweynaha & RW Soomaaliya oo kulan deg deg ah ka yeeshay go’aamada ka soo baxay Kismaayo, qaatay mawqif adag
MUQDISHO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasumada Soomaaliya ayaa sheegaya in Madaxda ugu sareysa dawladda Faderaalka Soomaaliya ay yeesheen shalay galab kulan xasaasi ah oo ay uga wada hadlayeen arrimaha shirka Kismaayo iyo sidii go’aan mideysan ay u qaadan lahaayeen.
Madaxweynaha iyo Ra’iisulwasaaraha ayaa ka wada hadlay suuragalnimada in gogol siyaasadeed hadda lagu qabto Muqdisho, taas oo ay garwadeen ka tahay dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Laakiin iskuma aysan raacin qorshahan, iyadoo uu Raysalwasaaruhu diiday in la qabto dadaal siyaasadeed iyo kulamo siyaasad shaqo ku leh waqtigan, wuxuuna soo jeediyey in aan waxba laga soo qaadin baaqa Kismaayo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa diiday in laga aamuso marxaladda baaqaas oo taabanayey arrimo waa weyn oo ku aadan masiirka Ummadda Soomaaliyeed, ayna waajib tahay in si wadajir ah loo abaaro.
Shirkaas markii uu soo dhamaaday ayaa Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo amray soo saarida warsaxaafadeed kooban, oo loogu baaqayo dhinacyada Siyaasadda Soomaalida.
Laakiin Raysalwasaaraha oo u muuqday in uu ka jawaabayo shirka Kismaayo ayaa cabiray dareen ka duwan midka Madaxweynaha Soomaaliya, wuxuuna sheegay in aan cidna loo joojineyn taas oo xaalad kale abuuri karta.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka welwelsan qodobada ka soo baxay shirka Kismaayo, gaar ahaana kuwa ku aadan hanaanka siyaasadeed oo halis galin karra marxaladda ay maanta ku jirto Soomaaliya.